Beijing na Belgrade: flightsgbọ elu na ụgbọ elu Hainan
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Beijing na Belgrade: flightsgbọ elu na ụgbọ elu Hainan
Flightgbọ elu mbụ nke ọrụ ọhụrụ ahụ, Hainan Airlines HU7937, nke si na ọdụ ụgbọ elu nke isi obodo Beijing, kwụsịrị n'ụzọ gara nke ọma na Belgrade Nikola Tesla Airport na 9: 20 am on September 15, 2017 oge mpaghara mgbe awa 13 gachara. Emume na mmemme iberibe akara maka ụgbọ elu ahụ bụ onye Mịnịsta Ala Serbia gara Ana Brnabic, Deputy Prime Minister na Minister of Construction Zorana Mihajlović, onye nnọchi anya China na Serbia Li Manchang, Hainan Airlines Vice President. Quan Dong na ndị isi na ọtụtụ ụlọ ọrụ China nwere arụmọrụ na Serbia yana otu ndị isi ụlọ ọrụ dị mkpa na ndị isi.
Mịnịsta Ala nke Serbia Ana Brnabic kwuru n'okwu ya na ọkwa nke imekọ ihe ọnụ n'etiti China na Serbia toro nke ukwuu, na ngụkọta uru nke ọrụ n'etiti mba abụọ ugbu a na-aga n'ihu nke ukwuu US $ 6 ijeri, mgbe, n’otu oge, azụmahịa mba ọzọ na-arịwanye elu. Onye nnochite anya China na Serbia Li Manchang kwuru na ọhụụ ọhụrụ na-apụta kwa ụbọchị n'etiti mba abụọ ahụ na ịmaliteghachi ọrụ ikuku n'etiti isi obodo abụọ ahụ bụ ihe akaebe ọzọ na-eto eto mmekọrịta ahụ. Na itinye n'ọnọdụ na China Otu Belt, Otu ụzọ ụzọ, Hainan Airlines na-ezube ịnọgide na-agbasawanye ọnụnọ ya na mpụga ahịa ụlọ ya, ọkachasị gafee mba Central na Eastern Europe, ọtụtụ n'ime ha amalitelarị mmekọrịta chiri anya na China, kwuru Quan Dong.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụgbọ elu Hainan ụgbọ elu emeela ngwa ngwa na mba ụwa, yana ọnụego nke ego a na-enweta na ngalaba mba na-eto kwa afọ. Na nkera nke abụọ nke afọ a, na mgbakwunye na Beijing-Prague-Belgrade na Shanghai-Tel Aviv Ọrụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a, Hainan Airlines ga-amalitekwa Shanghai-Brussels, Shenzhen-Brisbane, Chongqing-New York, Chengdu-New York, Shenzhen-Brisbane na ọrụ Shenzhen-Cairns tinyere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ gafere, na-agbasawanye njikọ mba ụwa nke ụgbọelu ahụ gburugburu ụwa.
Shenzhen na Brisbane bido n'ọdụ ụgbọ elu Hainan ụgbọ elu
Nnukwu ihe ngosi ihe mgbe ochie mmadụ na Africa ka a ga-emeghe